राम्री–राम्री जति सबै कांग्रेस, त्यसैले म‘नि कांग्रेस !
तस्बिर साभार : सामाजिक सञ्जालबाट
राजनीतिक र सामाजिक परिवेशका कारण महिनाको पहिलो सप्तान्तमा सामाजिक सञ्जालमा ‘मिस नेपाल’बारे ठूलै बहस भयो । कतिपय सामाजिक अभियन्ता ‘लाल’ र ‘काल’ बुझक्कडहरूले सुन्दरताको सर्वाङ्गीणता हुनुपर्ने मान्यतामा नीकिता चाण्डकको जीतलाई सौहार्दताको दृष्टिकोणले व्याख्या गरे । कतिपयले सुन्दरी प्रतियोगिताको मान्यता सुन्दरता नै हुनुपर्ने ठान्दै नीति शाहको पक्षमा वकालत गरे । तर, यी दुवै मान्यता आफ्ना ठाउँमा ठिक थिए वा थिएनन् भन्ने एउटा प्रसङ्ग हो । चाहे नीकिता हुन् वा नीति विक्ने चाहीँ सुन्दरता नै हो, युवती नै हो भन्ने विषय त राजनीतिक दलहरूका प्रयोगले पनि देखाइसकेको छ ।
वास्तवमा के विक्छ नेपालमा भन्ने उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त नै देख्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावताका अघिल्लो वर्ष डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा एउटा ट्वीटर बाढि आएको थियो । विकिनीमा ट्रम्पका ट्याटु छापेका युवतीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई ट्रम्पमय बनाएका थिए । चुनाव प्रचारको यो शैली अमेरिकी कंग्रेसकै लागि भएको थियो । यहि शैलीको निरन्तरता नेपाली चुनावमा देखिन थालेको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । यसलाई प्रविधिको विकासको उपयोग त मान्नैपर्छ साथै ग्लोबल बजारमा विक्ने ग्ल्यामर कन्टेन्ट र फोटोको चुनावी सदुपयोग पनि ठान्नुपर्छ ।
एकजना समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चुनावी प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेसले खटाएका सुन्दर युवतीहरूको तस्बिर ट्वीट गरी लेखे,‘राम्री–राम्री कांग्रेस त्यसैले म नि कांग्रेस ।’ मुक्ति राजवंशीको यो ट्वीटको घतलाग्दो शव्दलाई यहि आलेखको शिर्षक चुनेको छु । आजको पुस्ता ग्ल्यामरभन्दा बाहिर जान सक्तैन । त्यसैले कांग्रेसले चुनाव प्रचारमा खटाएका सुन्दर युवतीका तस्बिर विश्वव्यापी भएर सामाजिक सञ्जालमा छचल्किएका छन् । यसलाई खासगरी दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सहज होला ।
पहिलो, चुनाव प्रचारको सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण र गतिलो शैलीलाई कांग्रेसले उपयोग गरेको छ । र, अन्तिम प्रविधिको प्रयोगको हिस्सामा ग्ल्यामरलाई ब्रान्डिङ गर्ने मान्यतालाई देखाएको छ । यसले कांग्रेसको चरित्र नै पुँजीवादी हो भन्ने प्रष्ट्याउँछ । समयमैत्री चुनावी अभियानमा अन्य दलहरू पनि सुन्दरतालाई बेचीनै रहन्छन् । डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो विश्वका भएका कारणले उनले सुन्दरताभन्दा माथि उठेर चुनावी प्रचारमा कामुकता नै विक्रि गरेका थिए । अहिले, नेपाली कांग्रेसले सुन्दरताको व्यापार चुनावी प्रचारका रूपमा गरेको छ ।
स्थानीय चुनावकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विचारसँगै विकेको थियो, रञ्जु दर्शनाको सुन्दरता । विवेकशील नेपालीको विवेकले विक्रि गरेको थियो रञ्जुको ग्ल्यामर । त्यहाँ विवेकजन्य मुद्दासँगै सुन्दरता पनि थियो । नयाँ पुस्ताको मन रञ्जुले तान्नसक्नु र मिडिया हुँदै सामाजिक सञ्जालमा छाउन सक्नुको एउटा कारक उनको सुन्दरता होइन भनेर नकार्नै सकिँदैन । सामाजिक चेतनास्तर र पाखण्डपनका कारण विरोध, आलोचना र पक्ष र विपक्षमा तर्क हुनु स्वभाविक हो । पत्रकार किशोर नेपालले नेपाली पत्रकारितामा ग्ल्यामरका नाममा केटीका शरिर बेचे भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यसमाथि उनको तर्क थियो,‘यी आरोप लगाउनेहरू नै लुकी लुकी पत्रिका किनेर पढ्छन् ।’ यहि सतहको तथ्य पनि हो । नेपाली फिल्म उद्योगमा छोटा लुगा लगाउने, तिघ्रा देखाउने भनेर रेखा थापाको तिव्र आलोचना भयो । अहिले पनि हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिका अनेक पाटोमा हेर्ने हो भने रेखाका फ्यान र फलोअरहरूको संख्याको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन । यसबाट के पुष्टि गर्न सकिन्छ भने बजारमा विक्ने नै ग्ल्यामर हो । यो ओपन सेक्रेट स्वीकारोक्तिबीच नेपाली कांग्रेसको चुनावी शैलीमा सहमति र असहमति राख्नु एउटा विषय होला तर उसले चुनेको तरिकाले सामाजिक सञ्जालहरू भरिभराउ छन् ।
बजारलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन को चहाँदैन र ? नेपाल होस् वा विश्वबजारका प्रडक्ट । सवैको बजारीकरणको मुख्य माध्यम विज्ञापन नै हुन् । ति विज्ञापनमा केटी हुन् वा केटा सवैको सुन्दरता बेच्ने प्रयत्न सवैले गरेकै छन् । राजनीति होस् वा सत्ता सवैतिर महँगो मुल्यमा विक्ने ग्ल्यामर नै हो । त्यसैले गाउँघर, सहर, बजारमा प्रत्यक्ष विकेको सुन्दर चेहरा, सामाजिक सञ्जालमा परोक्ष रूपमा विक्रि गराउनु प्रविधिको बलियो उपयोग नै ठान्नुपर्छ, यसलाई दुरूपयोग भन्नेहरू आफुले गर्न नसकेपछि आत्मरतीमा गरिएको रोइलोमा रमाउनेहरू मात्र हुन् । अतः कांग्रेसको यो चाखलाग्दो चुनावी प्रचारले केही न केही र कहीँ न कतै प्रभाव छाडेकै ठान्नुपर्छ ।
सुन्दर युवती उभ्याएर प्रचार गरिएको चकलेट, चाउचाउ, कस्मेटिक्स् लगायतका समान विश्वबजारमा पर्याप्त विकेकै छन् । हिरोइन उभ्याएर सिनेमा, मोडल उभ्याएर गीत, लेडी फिगर देखाएर कोकाकोला, परिका काल्पनिक तस्बिर उतारेर धर्मग्रन्थका किताव, चर्चित अनुहार देखाएर रङहरू विक्रि भएको यो समाजमा सुन्दरी उतारेर चुनावमा उत्रिएको कांग्रेसले कति मत खरिद गर्न सक्छ त्यो चाहीँ परिणाममा हेर्न बाँकी छ ।